Phonesites- သင့်ဖုန်းကို အသုံးပြု၍ မိနစ်ပိုင်းအတွင်း အရောင်းလမ်းကြောင်း ဝဘ်ဆိုက်များနှင့် စာမျက်နှာများ ဖန်တီးပါ။ Martech Zone
၎င်းသည် ကျွန်ုပ်၏လုပ်ငန်းနယ်ပယ်ရှိလူအချို့ကို အမှန်တကယ်ဒေါသထွက်စေမည်ဖြစ်သော်လည်း ကုမ္ပဏီအများအပြားတွင် ကြီးမားသောဆိုက်ဖြန့်ကျက်မှုနှင့် အကြောင်းအရာစျေးကွက်ချဲ့ထွင်မှုဗျူဟာအတွက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကို ပံ့ပိုးပေးမည့် မော်ဒယ်မရှိပေ။ အထင်ကြီးလောက်တဲ့ လုပ်ငန်းတစ်ခုကို ပံ့ပိုးပေးဖို့ တစ်အိမ်မှတစ်အိမ်သွား ဒါမှမဟုတ် ပါးစပ်ကပြောနေသေးတဲ့ လုပ်ငန်းအသေးစားအနည်းငယ်ကို ကျွန်တော်သိပါတယ်။
ဖုန်းဆိုက်များ- မိနစ်ပိုင်းအတွင်း စာမျက်နှာများကို ဖွင့်ပါ။
လုပ်ငန်းတစ်ခုစီတိုင်းသည် လုပ်ငန်းအသစ်များဖြစ်ပေါ်လာစေရန် အထိရောက်ဆုံးသောအရောင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုထုတ်လုပ်ရန် ၎င်း၏ပိုင်ရှင်၏အချိန်၊ ကြိုးစားအားထုတ်မှုနှင့် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတို့ကို ဟန်ချက်ညီစေရမည်။ တစ်ခါတစ်ရံတွင်၊ ဝဘ်ဆိုက်တစ်ခုတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသည် ဒိုမိန်းတစ်ခုကို ဖမ်းယူကာ သန့်ရှင်းသော၊ ရိုးရှင်းသော၊ မိုဘိုင်းတုံ့ပြန်မှုရှိသော၊ ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ထားသော ဆင်းသက်သည့်စာမျက်နှာကို ထူထောင်ခြင်းကဲ့သို့ ရိုးရှင်းပါသည်။ အဲဒါက ဘာလဲ။ ဖုန်းဆိုဒ်များ အတွက်…
နမူနာပုံစံကို ရွေးပါ။ သို့မဟုတ် အစမှ စတင်ပါ။2ကလစ်ဖြင့်ကြိုတင်လုပ်ထားသောပုံစံများကိုထည့်သွင်းပါ။
စာမျက်နှာများကို စတင်တည်ဆောက်ပါ။ ၎င်းတို့၏ အလွယ်တကူ ဆွဲယူ၍ ချပေးသည့် တည်းဖြတ်စနစ်ဖြင့် စာသား၊ ရုပ်ပုံများနှင့် ဗီဒီယိုကို ပေါင်းထည့်ခြင်းဖြင့်။
ဆိုဒ်ကို တံဆိပ်တပ်ပါ။ သင့်စိတ်ကြိုက်ဒိုမိန်းကို အသုံးပြု၍ သင်အသုံးပြုနေသည့် ပြင်ပပလက်ဖောင်းများကို ပေါင်းစပ်ပါ။
အလိုအလျောက်တုံ့ပြန်မှုများကို စနစ်ထည့်သွင်းပါ။ အီးမေးလ် သို့မဟုတ် SMS ဖြင့် နောက်ဆက်တွဲ။
သင့်လက်လှမ်းမီမှုကို မြှင့်တင်ပါ။ ကြော်ငြာနှင့် AI-မောင်းနှင်သောကော်ပီမှတဆင့်။
Phonesites များသည် ခိုင်မာသောပုံစံများ၊ ဒေတာစုဆောင်းခြင်းနှင့် AI မောင်းနှင်သည့်အကြောင်းအရာများကို ပေါင်းစပ်ထားပြီး စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ သို့မဟုတ် အေဂျင်စီများသည် မိနစ်ပိုင်းအတွင်း မြင့်မားသောပြောင်းလဲခြင်းရောင်းချမှုလမ်းကြောင်းကိုမောင်းနှင်သည့်ဆိုက်များကို စတင်အသုံးပြုနိုင်သည်။
ဖုန်းဆိုဒ်များ လုပ်ငန်းပေါင်း 10,000 ကျော်သည် ဦးဆောင်မှုပေါင်း 1 သန်းကျော်ကို ဖန်တီးပေးပြီး ၎င်းတို့ကို ဝင်ငွေ သန်းပေါင်းများစွာအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲပေးခဲ့သည်။ Phonesites သည် နာကျင်မှုမရှိသော ဝဘ်ဆိုက်နှင့် ဆင်းသက်သည့် စာမျက်နှာ တည်ဆောက်သူဖြစ်ပြီး သင့်အား ဦးဆောင်လမ်းပြမှုများ၊ သုံးစွဲသူများ ပိုများလာစေရန်နှင့် အရောင်းပိုမိုရရှိစေမည်ဖြစ်သည်။ Phonesites သည် အသေးစား လုပ်ငန်းများနှင့် အေဂျင်စီများကို ဖွင့်ပေးသည်-
စာမျက်နှာများကိုဖွင့်ပါ။ မည်သည့်စက်ပစ္စည်းတွင်မဆို မိနစ်ပိုင်းအတွင်း။ ၎င်းတို့၏ဝဘ်ဆိုဒ်တည်ဆောက်သူသည် မိနစ်အနည်းငယ်အတွင်း သင့်ဆိုက်ကိုတည်ဆောက်နိုင်စေရန် သင်အသုံးပြုနိုင်သည့် ကြိုတင်တည်ဆောက်ထားသော၊ မြင့်မားသောပုံစံပြောင်းသည့်ပုံစံများပါရှိသည်။
ကောက်ယူစုဆောင်းခြင်း နှင့် စာအုပ်ချိန်း။ သင်၏အရောင်းလုပ်ငန်းစဉ်တစ်လျှောက် ဧည့်သည်များကို လမ်းညွှန်ပေးသည့် ရိုးရှင်းသောစာမျက်နှာများကို တည်ဆောက်ပါ ဒေတာများကို စုဆောင်းနေစဉ်တွင် သင်နောက်ဆက်တွဲလုပ်ဆောင်နိုင်စေရန်။
အကြောင်းအရာဖန်တီးပါ - Phonesite ၏ AI Writer ဖြင့် ကလစ်အနည်းငယ်နှိပ်ရုံဖြင့် မြင့်မားသောပြောင်းလဲနိုင်သော စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကော်ပီကို ဖန်တီးနိုင်သည်။
အီးမေးလ်နောက်ဆက်တွဲများ - အီးမေးလ်ပရိုဂရမ်တစ်ခုမလိုအပ်ပါ၊ Phonesites တွင်ပါရှိသောအီးမေးလ်စနစ်သည်သင့်အားနောက်ဆက်တွဲများကိုအလိုအလျောက်ပေးပို့နိုင်သည်။
အကူအညီရယူပါ။ - 1-on-1 ဗျူဟာခေါ်ဆိုမှုများ၊ တိုက်ရိုက်ချတ်၊ ကိုယ်ပိုင်အသိုင်းအဝိုင်းနှင့် အပတ်စဉ် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများကို ကူညီပေးရန် ကျွမ်းကျင်သူအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့သို့ တို့ပါ။
မည်သည့်အကြောင်းအရာ စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်မဆို (CMS) requires integration capabilities to enhance and add-on features and functionality. Phonesites is no different, with productized integrations to Zapier, MailChimp, Stripe, Twilio, Vimeo, YouTube, Google ReCaptcha, Facebook Ads, Google Analytics, Hotjar, Calendly, and more.
သင်၏ အခမဲ့ Phonesites စမ်းသပ်မှုကို စတင်ပါ။
ထုတ်ဖော်: ငါအဘို့အမိတ်ဖက်တယ် ဖုန်းဆိုဒ်များ ငါသည်ဤဆောင်းပါး၌ငါ့ Affiliate link ကိုအသုံးပြုနေသည်။
Tags: ရက်ရက်စက်စက်အယ်ဒီတာကိုဆွဲယူချပါfacebook ကိုကြော်ငြာတွေပုံစံများanalytics googleGoogle ReCaptchaဟိုတယ်ဆင်းသက်သည့်စာမျက်နှာ ဝဘ်တည်ဆောက်သူဆင်းသက်စာမျက်နှာများခဲစုဆောင်းခြင်း။mailchimpဖုန်းဆိုဒ်များအရောင်းပုံစံအရောင်းလမ်းကြောင်းတည်ဆောက်သူအရောင်းပြွန်ဆိုဒ်များအစင်းTwilioVimeoWebsite Builderyoutube ကzapper